မဂ် နှင့် ဖိုလ်
စူးစမ်းသူသည် လောဘတရား/ဒေါသတရား/မောဟတရားတို့မှ အထူးသဖြင့် စင်ကြယ်သော ထိုရဟန်းကို မြင်သောကြောင့်ထိုရဟန်း၌ ယုံကြည်မှုကို ဖြစ်ပွါးစေ၏၊ ယုံကြည်မှု ဖြစ်သည်ရှိသော် ချဉ်းကပ်၏၊ ချဉ်းကပ်သည်ရှိသော်ဆည်းကပ်၏၊ ဆည်းကပ်သည်ရှိသော် နားထောင်၏၊ နားထောင်သောသူသည် တရားကို နာယူ၏၊ ကြားနာရ၍ တရားကို ဆောင်၏၊ ဆောင်ထားသော တရားတို့၏ အနက်သဘောကို စူးစမ်းဆင်ခြင်၏၊ အနက်သဘောကို စူးစမ်းဆင်ခြင်သည်ရှိသော် တရားတို့သည် ရှုဆင်ခြင်ခြင်းငှါ ခံ့ကုန်၏၊ တရားတို့သည်ရှုဆင်ခြင်ခြင်းငှါ ခံ့သည်ရှိသော် အလိုဆန္ဒသည် ဖြစ်၏၊ အလိုဆန္ဒဖြစ်သည်ရှိသော် အားထုတ်၏၊ အားထုတ်သည်ရှိသော် နှိုင်းချိန်၏၊ နှိုင်းချိန်ပြီးသော် ပြင်းစွာအားထုတ်၏၊ စိတ်စိုက်နေသည်ရှိသော် ကိုယ် (နာမကာယ) ဖြင့်လည်း မွန်မြတ်သောသစ္စာကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်၏၊ ပညာဖြင့်လည်း ထိုးထွင်း၍ မြင်နိုင်၏။ အာရဒွါဇ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် မဂ်ကို လျော်စွာ သိခြင်းသည် ဖြစ်၏၊ ဤမျှ အတိုင်းအရှည်ဖြင့်မဂ်ကို လျော်စွာ သိတက်သူ ဖြစ်၏၊ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့်လည်း ငါတို့သည် သစ္စာကို လျော်စွာသိခြင်းကို ပညတ်ပြောဆိုကုန်၏၊ ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းသည်ကား မဖြစ်သေးသည်သာတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁. အသျှင်ဂေါတမ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် မဂ်ကို လျော်စွာ သိခြင်းသည် ဖြစ်ပါ၏၊ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် မဂ်ကို လျော်စွာ သိသူ ဖြစ်ပါ၏၊ ဤမျှ အတိုင်းအရှည်ဖြင့်လည်း အကျွန်ုပ်တို့သည်မဂ်ကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းကို မြင်ကြပါကုန်၏။ အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်မျှ အတိုင်းအရှည်ဖြင့် ဖိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း။ ဖိုလ်သို့ အစဉ်ရောက်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ ထိုတရားတို့ကိုသာလျှင် ထုံခြင်းကြောင့် ပွါးများခြင်းကြောင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ လေ့လာခြင်းကြောင့် ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းသည် ဖြစ်၏၊ ဘာရဒွါဇ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းသည် ဖြစ်၏၊ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် ဖိုလ်သို့ လျော်စွာ ရောက်၏၊ ဤမျှ အတိုင်းအရှည်ဖြင့်လည်း ငါတို့သည် ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းကို ပညတ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၂. အသျှင်ဂေါတမ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းသည် ဖြစ်ပါ၏၊ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့် ဖိုလ်သို့ လျော်စွာ ရောက်ပါ၏၊ ဤမျှအတိုင်းအရှည်ဖြင့်လည်း အကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းကို မြင်ကြပါကုန်၏၊ အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားသည် ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ (မဂ်ကို) အားထုတ်ခြင်းသည် ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြု၏၊့ အကယ်၍ ထိုမဂ်ကို အားမထုတ်ငြားအံ့၊ ဖိုလ်သို့ လျောက်ပတ်စွာ မရောက်နိုင်လေရာ၊ မဂ်ကို အားထုတ်ခြင်းကြောင့်သာ ဖိုလ်သို့ လျောက်ပတ်စွာ ရောက်နိုင်၏၊ ထို့ကြောင့် (မဂ်ကို) အားထုတ်ခြင်းသည်ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းအား များစွာကျေးဇူးပြု၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၃. အသျှင်ဂေါတမ မဂ်ကိုအားထုတ်ခြင်း အား အဘယ်တရားသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်အသျှင်ဂေါတမအား မဂ်ကို အားထုတ်ခြင်းအား ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ နှိုင်းချိန်ခြင်းသည် မဂ်ကို အားထုတ်ခြင်းအား များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ မနှိုင်းချိန် ငြားအံ့၊ ဤမဂ်ကို ပွါးများခြင်းကို အားမထုတ်လေရာ၊ နှိုင်းချိန်သောကြောင့်သာ (မဂ်ကို ရအောင်) အားထုတ်၏၊ ထို့ကြောင့် မဂ်ကို အားထုတ်ခြင်းအား နှိုင်းချိန်ခြင်းသည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၄. အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားသည် နှိုင်းချိန်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား နှိုင်းချိန်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ အားထုတ်ခြင်းသည် နှိုင်းချိန်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ အားမထုတ်ငြားအံ့၊ မနှိုင်းချိန်လေရာ၊ အားထုတ်သောကြောင့်သာ နှိုင်းချိန်၏၊ ထို့ကြောင့် အားထုတ်ခြင်းသည် နှိုင်းချိန်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၅. အသျှင်ဂေါတမ အဘယ်တရားသည် အားထုတ်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား အားထုတ်ခြင်းအား များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်သော တရားကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ သည် အားထုတ်ခြင်းအား များစွာကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ မဖြစ်ငြားအံ့၊ အားမထုတ်လေရာ၊ ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ ဖြစ်သောကြောင့်သာ အားထုတ်၏၊ ထို့ကြောင့် ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’သည် အားထုတ်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၆. အသျှင်ဂေါတမ ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ အား အဘယ်တရားသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ အား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကိုမေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’အား တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ကျေနပ်ခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ ထိုတရားတို့ကို အကယ်၍ စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်ခြင်းမဖြစ်ငြားအံ့၊ ပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’ သည် မဖြစ်လေရာ၊ တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်သောကြောင့်သာပြုလိုမှု ‘ဆန္ဒ’သည် ဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် ပြုလိုမှု’ဆန္ဒ’ အား တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်ခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၇. အသျှင်ဂေါတမ တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်ခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ကျေနပ်မှုအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်ခြင်းအား အနက်သဘောကို စူးစမ်းခြင်းသည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ ထိုအနက်သဘောကို စူးစမ်းခြင်းသည် မဖြစ်ငြားအံ့၊ ဤတရားတို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်မှု မရကုန်ရာ၊ အနက်သဘောကို စူးစမ်းသောကြောင့်သာ တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှု၍ ကျေနပ်မှုရကုန်၏၊ ထို့ကြောင့် အနက်သဘောကို စူးစမ်းခြင်းသည် တရားတို့ကို စူးစိုက်ကြည့်ရှုရာ၌ ကျေနပ်မှုအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၈. အသျှင်ဂေါတမ အနက်သဘောကို စူးစမ်းခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်ပါသနည်း၊ အနက်သဘောကို စူးစမ်းခြင်းအား များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်သော တရားကို အကျွန်ုပ်တို့သည်အသျှင်ဂေါတမအား မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ အနက်သဘောကို့စူးစမ်းခြင်းအား တရားကို ဆောင်ခြင်းမှတ်ခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ ထိုတရားကိုမဆောင်ငြား မမှတ်ငြားအံ့၊ ဤအနက်သဘောကို မစူးစမ်းနိုင်လေရာ၊ တရားကိုဆောင်ထားမှတ်ထားသောကြောင့်သာ အနက်သဘောကို စူးစမ်းနိုင်၏၊ ထို့ကြောင့် အနက်သဘောကိုစူးစမ်းခြင်းအား တရားကို ဆောင်ထား ခြင်း မှတ်ထားခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၉. အသျှင်ဂေါတမ တရားကို ဆောင်ထားခြင်း မှတ်ထားခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား တရားကို ဆောင်ထားခြင်း မှတ်ထားခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကို မေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇတရားကို ဆောင်ထားခြင်း မှတ်ထားခြင်းအား တရားကို ကြားနာခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ ထိုတရားကို မကြားနာငြားအံ့၊ ဤတရားကို မဆောင်ထား မမှတ်ထား နိုင်လေရာ၊ တရားကိုကြားနာသောကြောင့်သာ တရားကို ဆောင် မှတ်နိုင်၏၊ ထို့ကြောင့် တရားကို ဆောင်ထားခြင်း မှတ်ထားခြင်းအား တရားတော်ကို ကြားနာခြင်းသည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁၀. အသျှင်ဂေါတမ တရားနာခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား တရားနာခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကိုမေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ တရားနာခြင်းအား နားစိုက်ခြင်းသည် များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ နားမစိုက်ငြားအံ့၊ ဤတရားကို မနာလေရာ၊ နားစိုက်သောကြောင့်သာတရားကို နာ၏၊ ထို့ကြောင့် တရားနာခြင်းအား နားစိုက်ခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁၁. အသျှင်ဂေါတမ နားစိုက်ခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား နားစိုက်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကိုမေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ နားစိုက်ခြင်းအား ဆည်းကပ်ခြင်းသည် များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ မဆည်းကပ်ငြားအံ့၊ ဤသို့ နားမစိုက်လေရာ၊ ဆည်းကပ်သောကြောင့်သာ နားစိုက်၏၊ ထို့ကြောင့် နားစိုက်ခြင်းအား ဆည်းကပ်ခြင်းသည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော် မူ၏)။
၁၂. အသျှင်ဂေါတမ ဆည်းကပ်ခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား ဆည်းကပ်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကိုမေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ ဆည်းကပ်ခြင်းအား ချဉ်းကပ်ခြင်းသည် များစွာကျေးဇူး ပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ ထိုသို့ မချဉ်းကပ်ငြားအံ့၊ ဤသို့ ဆည်းကပ်ခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ရာ၊ ချဉ်းကပ် သောကြောင့်သာ ဆည်းကပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် ဆည်းကပ်ခြင်းအားချဉ်းကပ်ခြင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁၃. အသျှင်ဂေါတမ ချဉ်းကပ်ခြင်းအား အဘယ်တရားသည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်ပါသနည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အသျှင်ဂေါတမအား ချဉ်းကပ်ခြင်းအား များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားကိုမေးလျှောက်ပါကုန်၏ဟု (လျှောက်၏)။
ဘာရဒွါဇ ချဉ်းကပ်ခြင်းအား ယုံကြည်မှု ‘သဒ္ဓါ’ သည် များစွာကျေးဇူးပြုတတ်၏၊ အကယ်၍ ထိုသို့ ယုံကြည်မှု ‘သဒ္ဓါ’ မဖြစ်ငြားအံ့၊ ဤသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ရာ၊ ယုံကြည်မှု ‘သဒ္ဓါ’ ဖြစ်သောကြောင့်သာ ချဉ်းကပ်၏၊ ထို့ကြောင့် ချဉ်းကပ်ခြင်းအား ယုံကြည်မှု’သဒ္ဓါ’သည် များစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ (မန ၉၅)